Ny fahasamihafana amin'ny fitsaboana
Bakteria sy viriosy: saika mandre azy ireo matetika amin'ny fahitalavitra, amin'ny radio, ary amin'ny vaovao ianao. Fa inona no maha samy hafa an'ireo pathogens roa mampatahotra? Tsy afaka mahita ny valan'aretina roa miaraka amin'ny maso mitanjaka isika. Fa ny fahasamihafana dia fototra. Azavainay ny fahasamihafana amin'ny fiteny tsy fitsaboana. Raha misy fisalasalana anefa, mifandraisa amin'ny dokotera.
Inona no maha samy hafa ny bakteria sy ny viriosy?
Ny hany fantatry ny olona dia ny mamparary anao azy. Fa izany no izy. Fa ahoana no mbola tsy itovizany? Inona no mampidi-doza kokoa ary ahoana no itondrana azy ireo? Ny lafiny lehibe indrindra amin'ny fanavahana ny bakteria sy ny viriosy dia voalaza etsy ambany.
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny viriosy sy bakteria - Saripikan'i Pixaline avy amin'i pixeline
Ny mahasamihafa ny habeny
Ny haben'ny bakteria sy ny viriosy no zava-dehibe indrindra raha ny mahasamihafa azy roa. Satria bakteria lehibe kokoa. Hatramin'ny in-100. Noho io antony io, ny bakteria dia azo fantarina amin'ny alàlan'ny mikraoskaopy hazavana ihany koa. Sahabo ho antsasaky ny micrometatra ny savaivony. Ny viriosy dia tsy hita sy azo fantarina amin'ny alàlan'ny mikraoskaopy elektronika fotsiny.
Mivantana kokoa ny virus. Na dia voarafitra amin'ny rindrin'ny sela aza ny bakteria, manana ribosome sy cytoplasm, ary koa sela misy sela, dia misy rindrina proteinina ao ihany ny viriosy.
Raha ampitahaina amin'ny bakteria dia mila mpampiantrano ny viriosy. Midika izany fa tsy afaka mitombo ihany ny viriosy raha miditra ao anaty sela toy ny katsentsitra izy ireo. Avy eo dia ampiasain'izy ireo ny fananan'ny sela hampitomboana ny vatan'izy ireo ao anatiny mandritra ny fizarana sela voajanahary. Ny bakteria dia mihamaro amin'ny alàlan'ny fantatra amin'ny hoe fizarazarana sela, izay anaovana kopia ny ADN, mamatotra ny afovoany avy eo ilay bakteria ary avy eo mizara. Ny valiny dia antsoina hoe sela zanaka vavy. Ireo sela roa ireo dia afaka mihamaro indray.
Tsy velona ny virus
Ireo virus dia tsy manana metabolisma manokana. Ny bakteria dia mila fepetra fototra, noho izany ny fanavahana ny bakteria aerobika (izany hoe bakteria mila oksizenina) sy bakteria anaerobika (izay tsy mila oksizena). Ny bakteria sasany koa dia mila akora hafa, toy ny hazavana na fosforôra.
Ny karazana aretina
Satria miditra ao amin'ny selan'ny olombelona izy ireo, dia miantoka ny fanafihan'ny hery fiarovan'ny tena ny sela, satria ao anaty sela ireo viriosy. Ohatra, izany dia mitranga amin'ny virus HIV, izay avy eo mahatonga ny SIDA ho toy ny aretina autoimmune. Satria manana metabolisma manokana izy ireo, ny bakteria koa dia manana vokatra manimba, ary manimba ny olombelona ny sasany.
Tsy marina ny tsaho miely fa hasiana antibiotika ho an'ny virus gripa. Ny antibiotika dia manampy amin'ny bakteria fotsiny satria manafika azy ireo ary, ohatra, manimba ny rindrin'ny sela. Manimba azy ireo izany ary maty. Ny antibiotika dia manana tombony fa ny rindrin'ny bakteria ihany no atrehiny fa tsy ny sela olombelona. Ny anton'izany dia ny firafitr'ireo rafitr'ireo sela ireo.
Fomba iray hafa hanafoanana ny bakteria ny fanomezana antibiotika, izay manova ny tontolon'ny bakteria amin'ny fomba tsy ahafahany miaina intsony, na farafaharatsiny mba tsy hitombo.
Somary sarotra kokoa ny viriosy satria sarotra kokoa ny lasibatra. Ny vatana dia tsy maintsy miady amin'ny ankamaroan'ny aretina virosy.
Amin'ny aretina virosy, indrisy, ny soritr'aretina ihany matetika no azo alaina. Matetika dia mandeha tsara izany satria matanjaka be ny hery fiarovan'ny olombelona. Ny fanafody manampy amin'ny viriosy dia antsoina hoe antivirals. Mampalahelo fa tsy afaka miady amin'ny viriosy ireo raha tsy manimba ny selan'ny tenan'olombelona. Hatreto dia mbola tsy hita ny fanafody izay tsy manimba ny vatana.
Ny virus sy ny bakteria dia azo ampitahaina amin'ny lafiny iray ihany: manimba ny vatana izy ireo. Na izany aza tsy ny bakteria rehetra no manimba ny vatana. Ny bakteria sasany dia miaina anaty simbiose miaraka amin'ny olombelona. Betsaka amin'izy ireo no tena zava-dehibe amintsika. Ny virus kosa dia tsy misy ilana ny olombelona.
Ireo otrikaretina miaro amin'ny bakteria matetika dia tsy manampy amin'ny viriosy mihitsy! Raha tsy isalasalana àry dia vakio ilay famaritana alohan'ny hitadiavanao tena amin'ny filaminana mamitaka.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 17. Aprily 2020 15. Jolay 2021 Sokajy fahasalamanaKeywords bakteria, Corona, Coronavirus, Covidien, Covidf19, virosy
indray Lahatsoratra taloha: Matory tsara | FAHASALAMANA
more Lahatsoratra manaraka: Faran'ny herinandro romantika | Fiaraha-miasa tantaram-pitiavana
Mikaroha fiteny (fitsapana) amin'ny fiteny maro